> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado Khasaaray ama la tirtiro Xogta laga Centon Electronics DataStick
Fadlan Help Me My ka Centon Electronics DataStick soo ceshano Data
Waxaan leeyahay ka Centon Electronics 8GB DataStick Pro USB 2.0 iyo waxa la shaqeeya sano ka badan. Shalay markii aan wax xidhiidh ah la ii PC, waxaan ka helay fariinta "Fadlan qaab qalab aad". Waxaan leeyahay xog aad u muhiim ah oo aan qaab karaan kaarka. Iyo talo kasta oo waxtar ii soo ceshano xogta ku yaal? Thanks aad u badan.
Tani waa arin iska caadi ah, laakiin niyad. Waxaa dhacda inta badan, maxaa yeelay, aad DataStick kharribmay, laakiin aad fursad weyn si ay kor u arrinta. Si aad xog muhiim ah oo aad ku badbaadi hor formatting DataStick ah, waxaad isku dayaya karaa iyadoo la isticmaalayo barnaamijka xogta flash drive ah.
Waxaan si adag ugu talinaynaa Wondershare Data Recovery , Wondershare ama Data Recovery for Mac in aad. Tani waa qalab Sixir u jeesta adkayn kabashada xogta talaabooyin fudud. Iyada oo taageero u ah, waxaana suurto gal ah in aad soo kaban karto xogta sida sawirada, waraaqaha xafiiska, archives, videos iyo music ka Centon Electronics DataStick. Waxa ay taageertaa xogta soo kabsaday lumin ay sabab u tahay sababo kala duwan, oo ay ku jiraan flash drive kharribeen, tirtirka shil ah, formatting, iwm
Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad barnaamijka Wondershare Data Recovery ka hoose si aad baarista Centon Electronics DataStick. Fadlan kala soo bixi version saxda ah ee OS computer aad.
Qabtaan Centon Electronics DataStick Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Aan sameeyo dib u soo kabashada la Windows version of Wondershare Data Recovery. Dadka isticmaala Mac, edbinta waa la mid.
Tallaabada 1 Dooro Mode Recovery ah in baarista Centon Electronic DataStick
Download Wondershare Data Recovery for Windows oo ku xidh on your computer. Burcad barnaamijka oo aad arki doonaa daaqadaha ah oo bixiya 3 hababka soo kabashada, waayo, waxaad ka soo xusho.
Halkan aynu dooro "lumay Recovery File".
Tallaabada 2 baarista Centon Electronic DataStick
Halkan waxa aad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan warqad drive ee aad Centon Electronic DataStick oo guji "Start" in iskaan xogta waxaa gudaha.
Fadlan xaqiiji inaad si ku xiran aad Centon Electronic DataStick la computer oo waxaa loo aqoonsan karin sida drive adag.
Fiiro gaar ah: Waxaad go'aansan kartaa "Enable Deep Scan" furmo aad.
Tallaabada 3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh helay Data iyo Them Xulo Soo Celinta
Marka scan ay ka badan tahay, ku jira oo dhan helo waa la qori doonaa qaybaha bidixda ee suuqa, oo ay ku jiraan "Graphics", "Audio", "Archive", "Document", iwm Waxa kale oo aad ka badalan karaa natiijada iskaanka in "Jidka ".
Inta badan noocyada files, waxaad eegi kartaa haddii ay yihiin waxa aad doonayso in la soo celiyo ama aan magacyadooda la file. Oo faylasha sida image, waxaad iyaga ku eegaan karo, ka hor soo kabashada.
Ugu dambeyntii, waxaad dooran kartaa kuwa files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad kombuutarka. Fiiro gaar ah: Fadlan ha doortaan qalabka lagu keydiyo oo cusub ama folder a on your computer si loo badbaadiyo macluumaadka soo kabsaday.
Sidee inuu ka soo kabsado Photos ka Canon PowerShot G12